कति तपाईं नाम, थर वा मध्य नाम "oglu" मा एक उपसर्ग संग मान्छे भेट्न गर्छन्। तपाईं के अर्थ "oglu" आश्चर्य गर्छन्? आज हामी दृश्य को एक ऐतिहासिक र कानुनी बिन्दु यो प्रश्नको जवाफ।
नाम पुर्खाहरूको देखि "oglu" को मूल
प्राचीन तुर्क धेरै पूर्वी राष्ट्रका पुर्खाहरूको छन्। तिनीहरूले पहिलो-जन्म पुरुष "oglu" भनिन्छ गरिएको छ, "छोरा" अनुवाद हो। पछि नाम बीचको नाम वा भविष्यमा पुस्ताका थर परिवर्तन भएको थियो। यसरी, "oglu" नाम gripe केटा यो एक मानिस, आफ्नो बुबाको छोरा पर्छ भन्ने हो।
कसरी नाम "oglu"
को अजरबैजानी बारेमा बोल्ने, नाम छैन त लामो पहिले देखि उठ्दा। को 19 औं शताब्दीमा फिर्ता अजरबैजानी मात्र आफ्नो नाम र आफ्नो पिता को नाम को उपसर्ग थियो। सामान्यतया यहाँ यी विकल्पहरू: "oglu" (वा यसको वर्तमान फारममा "oglu"), "-zadeh" (अर्थ "सन्तानका" नाम को मूल को फारसी जरा छ), तिनीहरूले एक पुरुष नाम प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणका लागि, Ibragim Sattar oglu, Suleymanbek Hassanzadeh। "Oglu" के गर्छ, हामी बुझ्न। र के महिला नाम बारे? यहाँ, पुरुष समान - महिला नाम गर्न "छोरी" अर्थ, "oglu" थप्दा थियो। उदाहरणका लागि, एक महिलाको नाम यस जस्तो थियो: Reyhan Kurban oglu।
के नाम "oglu" वा "zade" गर्छ, हामी पहिले नै थाहा छ। तर आधुनिक संसारमा, तपाईं उपसर्ग "oglu" एउटा व्यक्ति भेट्न भने, यो एक patronymic गर्न कायापलट हुनेछ, तर अन्तिम विकल्प दृढ सन्तानहरू को भविष्य पुस्ताका नाम को मूल छ जो बुबा को नाम स्थापित "-zadeh"।
जीवित प्राणीहरू, पूर्वी मानिसहरूका मा, प्रत्यय पुरानो प्रकारका संग समाप्त नाम को रूप संरक्षित: -oglu, -ly, ली, -zadeh, झन् महिला (क), -ev (क), कम्तिमा -ski (ND)। उदाहरणका लागि, Selimzade, Juvarly, Kasumbeyli, Tagiyev Muganlinsky।
रूस patronymic मा शिक्षा को मूल
पनि रूस पुरातन इतिहास मा मान्छे patronymic लगाएका फेला थियो। तर आधुनिक व्याख्या, उदाहरणका लागि, Sergeev Nikolay Petrovich, केवल आचरण को उच्चतम सर्कलमा थियो, र शाही परिवार बीच। सार्वभौम को कृपा, यो थियो patronymic बोक्न सक्षम। एक किसान नाम यस जस्तो हुन सक्छ: निकोलस पत्रुस र Petrov छोरा को छोरा। को क्रमिक बिवरण वा कागजात सिर्जना गरिएको थियो जब यी आधार मा इतिहासकार समय निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्य मानिसहरूको बीचको नाम कसरी
मुख्य पछि नाम अरब एक patronymic उपसर्ग "बिन" आफ्नो बुबाको नाम अगाडि (पुरुष) र "पट्टी" (महिलाहरु) को रूपमा डिजाइन गरिएको छ। उदाहरणका लागि, Khairat इब्न Rashid (Khairat छोरा Rashid)। महिला patronymic भन्ने तथ्यलाई बावजुद - एक दुर्लभ घटना, तर त्यहाँ अपवाद हो: Abia bint Rashid (Abia छोरी Rashida)।
patronymic यहूदी मा उपसर्ग "बिन" वा "बार" संकेत छ। उदाहरणका लागि, हारून बेन सुलेमान (सुलेमानको छोरा हारून), एक पल्ट Yochai दाऊदले (दाऊदका छोरा Yochai)।
के उपसर्ग गर्छ "oglu" Azerbaijanis, हामीलाई थाहा छ। तर मान्छे को वर्तमान पुस्ता मात्र 20 औं शताब्दीको पहिलो नाम थियो सोभियत शक्ति को आगमन संग, त्यसैले अक्सर पाउन सकिन्छ, उदाहरणका लागि नाम को ध्वनि छ: Israfil Huseyn oglu Aliyev। जसको अर्थ Aliev Guseyn Israfilovich।
के आधुनिक संसारमा बीचमा नाम (patronymic) मा "oglu" गर्छ
"Oglu" मानिसको एक विशेष परिवार पर्छ भन्ने हो। आखिर, आफ्नो बुबा धेरै छोराहरू हुन सक्छ। यसरी, यो मानिसको नाम एक आवश्यक घटक रूपमा सेवा गर्दैछन्। हाल "oglu" वा "uly" नाम को गठन एउटा अत्यावश्यक घटक छैन, तर पूर्वी मानिसहरू धेरै राखिएको। यो संलग्न पुर्खाहरूको एउटा आदर भन्दा बढि छ। कागजातहरूको मा "oglu" हाइफन एक स्पेस, वा कम राजधानी पत्र संग लेखिएको छ। आरएफ नागरिक राहदानी को दर्ता मा -vich मा सामान्य patronymic मा "oglu" वा "Russified" नाम उपसर्ग बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
यो कन्सोल अनुवाद छैन भइरहेको त र विदेशी भाषामा कागजातको दर्ता लिपिबद्ध यूरोप, "मध्य नाम" को कुनै अवधारणा छ।
के व्यवस्थाको दृश्य को बिन्दुबाट "oglu" गर्छ
झन्, पूर्वी राष्ट्रका साना पुस्तामा आफ्नो कागजात को अवकास गर्न patronymic "oglu", "oglu", "uly" oglu "gizi", गर्न platformers प्रकारका बिना वा विदेश आफ्नो गणतन्त्र बाहिर जाँदै भने त्यहाँ कानुनी कठिनाइ छन् resorted छ, कागजी कार्रवाई। विशिष्ट क्षेत्रहरु मा कुरा संग अवस्था आज को रूपमा? निम्न विचार गर्नुहोस्:
Tuva गणतन्त्र - 1996 मा नागरिक को नाम मा "oglu (y)," "oglu" को प्रयोग को अनुमोदन मा व्यवस्था अपनाए। र 2010 मा, विधान स्तरमा पूर्व फिक्स यी आकारहरू थप्न युरोपेली नाम गर्न अनुमति दिएको छ।
साखा - स्थानीय मुद्दा चलाउने व्यक्ति कार्यालय को समस्या सम्बन्धमा सरकार कार्यक्रम र निर्देशिका नाम को platformers प्रकारका नागरिक को patronymic मा द्वन्द्व मुद्दाहरू समाधान गर्न उद्देश्य, विकास गरिएको छ सन्दर्भमा।
Tatarstan गणतन्त्र - गणतन्त्र को "परिवार कोड" मा बच्चाको आमाबाबुले भविष्यमा नागरिक नाम को शिक्षाको बारेमा निर्णय गर्न एक संभावना छ।
Buryatia गणतन्त्र - यहाँ 1999 मा राष्ट्रिय परम्परा अनुसार नाम लगाउन अनुमति व्यवस्था स्वीकृत भएको थियो। यो Buryats को सबै यस्तो मौका छ कि टिप्पण लायक छ। को चिटा क्षेत्रमा मिलयो ल्याइयो जो Agin-स्वायत्त क्षेत्र, यो कमी वसोवास। शोधकर्ताओं त्यहाँ 25 पुस्ताका गहिराइमा तल आउन गरेको प्राचीन नाम को विशेषता हो भनेर याद गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई धेरै गाह्रो व्यवहार गर्छन्। विशेष गरी तिब्बती र संस्कृत भाषामा देखि उधारो लोकप्रिय जोडिएको नाम हुन्छन्।
किर्गिज गणतन्त्र - गणतन्त्र वसोवास झन् platformers प्रकारका बिना थर परिवर्तन गर्न resorting गरिएको छ। स्थानीय बिल मा अनुसार राष्ट्रिय परम्परा संग नाम, थर, patronymic को हिज्जे सुधार्न एक योजना माथि कोरिएका।
तथापि, मिति गर्न, रूसी संघ को कुनै पनि नागरिक राष्ट्रिय परम्परा, धर्म वा विश्वास देखि सुरु, यसको नाममा निर्णय गर्ने अधिकार हुनेछ।
नियन - यो के हो? जहाँ लागू नियन
छाला हेरविचार: "भिटामिन F99" (क्रीम)। ग्राहक समीक्षा, विशेषताहरु र प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ
"Naruto" मा Yamato वर्ण
आफ्नै विवाह लागि तयार सपना के बारेमा थप जान्न
लागि रूसी सुपर-नांद: कसरी योजना पाठ लेख्न
दाऊदले Hayter, अभिनेता, लिपि लेखक: जीवनी, Filmography
वजन लागि सोडा स्नान: डाक्टर को समीक्षा - तपाईंलाई थाहा हुनुपर्छ?
को मास्को Kremlin को गिरजाघर वर्ग: योजना, रेखाचित्र, वर्णन, इतिहास, र फोटो। गिरजाघर वर्ग कहाँ छ?
ISDone.dll: अनप्याक गर्दा एउटा त्रुटि देखापर्यो। त्रुटि ISDone.dll